Burma Strange News (Burmese Version): ကွင်တားနား၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ်ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ရုံး နေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်ရ ..
ကွင်တားနား၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ်ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ရုံး နေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်ရ ..
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်အိုဟေး၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ်၏ ရလဒ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ရုံးကို နေရာပြောင်းရွှေ့လိုက်ရကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ အကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှတ် (၆) နတ်မောက်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ရုံးမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းကြည့်ရာ ၎င်းက “ဟုတ်လား . ကျွန်တော်တို့ ရုံးပြောင်းသွားတာ ကျွန်တော်တောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဘယ်နေရာကို ပြောင်းသွားတာလဲ . ကျွန်တော်တို့ရုံး Website မှာ တင်ထားတဲ့ လိပ်စာကို အခုချက်ချင်း ပြောင်းဖို့ ပြောလိုက်ပါမယ်” ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ကွင်တားနားသည် ၎င်း၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ် အတောအတွင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ၊ တခြားသော နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုဆွေးနွေပွဲများမှ ရလဒ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်း ခရိုင် အင်းစိန် ထောင်တွင်း တရားရုံးက ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်ကို အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မ ၃၃ (က) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်လိုက်ခြင်း ပေါ်ထွက်လာသည်။
တာတေကြီးနှင့် နှစ်ဘက်ချွန် ပူးပေါင်းရေးသားသည်။
Posted by BS News at 12:33 AM